हाम्रो वरपर विश्व, वा संक्षिप्त निबंध मा युरोप को राजधानी
सबैलाई यात्रा गर्न प्रेम गर्नुहुन्छ। किनभने यो दुनिया हेर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। मानिसहरूलाई बाँच्न र तपाईं धेरै बढी हेर्न चाहनुहुन्छ भन्ने महसुस कसरी अझै स्पष्ट थियो जहाँ स्थानहरू हेर्नुहोस्। अब मान्छे संसारभरि यात्रा गर्न मौका छ। र धेरै मानिसहरू यो मौका प्रयोग गर्नुहोस्।
सुरु, पाठ्यक्रम, यो पुरानो युरोप संग राम्रो छ। पहिले, ध्यान लायकको केही छ, र दोश्रो कुरा, यो हेर्न चाहन्छ कि प्रत्येक देशमा निर्धारण गर्न सम्भव छ। सुरु गर्न, तपाईं कुनै पनि युरोपेली राजधानी यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। निर्णय गर्न मुख्य कुरा तपाईं नजिक छ के। शानदार, एक जादू कार्डमा भने, प्राग वा मैड्रिड हल्ला। पेरिस, मानिन्छ जो सबैभन्दा रोमान्टिक शहर संसारको र कठोर बर्लिन। छनौट!
सबै युरोपेली क्यापिटल आपसमा केहि समान छन्, तर एकै समयमा पूर्ण बिभिन्न। तपाईं एक नक्सा हेर्न भने, यो युरोपेली देशहरूको विकास नै बाटो मा बारे आउँदै गरेको स्पष्ट हुन्छ। प्रत्येक देशमा, raged feudal लडाईंहरु, हामी मध्ययुगीन महल भ्रमण गर्न सक्षम छन् जो धन्यवाद। राजा सपना देख्यो र एउटा पोस्टकार्ड मा मात्र सम्भव छैन हेर्न, महलों मा आफ्नो सपना embodied। तर हरेक देश आँखा र हृदय-रोक्न आकर्षित कुरा फरक छ।
युरोप बढी र थप नयाँ राजधानी खोजी, धेरै चाँडै तपाईं शहर चयन गर्नुहोस् जसमा सहज र शान्त, साथै फेरि र फेरि भेट्न चाहनेहरूलाई रूपमा। सबैलाई फरक छ, र प्रत्येक आफ्नै लगभग केहि हुनेछ। कसैले आजीवन सपना एफिल टावर विश्वको हेर्न, र कसैले मैड्रिड मा एक गोरु जुदाई हेर्न चाहन्छ। कसैले Louvre masterpieces अघि एम्स्टर्डम को पुल, र कसैले मोहित कठोर मा endlessly लक्षविना हिड्नु हुनेछ।
अध्ययन र जो को ज्ञान को लागि, इतिहास को शताब्दीयौंदेखि संग fraught सबै युरोपेली पूंजी एक जीवनकालमा को पर्याप्त छैन, तर, तैपनि, यो प्रयास लायक छ। उदाहरणको लागि, हंगेरी र बुडापेस्ट यसलाई प्रत्येक जो आफ्नो जरा र परम्परा छ तीन शहर देखि गठन। र "अनन्त शहर" रोम? यसलाई मा इतिहास मा हरेक पत्थर steeped र आफ्नो आँखा, माथि प्राप्त गर्न मन आँखा रूपमा बन्द गर्नुपर्छ , रोमी सम्राटहरूको को ग्लेडियेटर्स को रंगशालामा मर्न सराहना।
समुद्र सम्झनाहरु युरोप को क्रिसमस राजधानी छोड्नुहोस्। लामो दिइएको जाडो बिदा, तपाईं आफैलाई स्मरणीय छुट्टी दिन सक्छ र देश प्रेम भेट्न। र त्यहाँ खाता स्थानीय भन्सार र परम्परा मा लिएर, नयाँ वर्ष, स्थानीय समय मनाउन। उदाहरणका लागि, तपाईं उहाँलाई प्राग, मा आतिशबाजी सुरु पूरा गर्न सक्छन् वेन्सेस्लास वर्ग वा VLTAVA मा एक ड्रागन डुङ्गा चढेर। र यदि तपाईं नयाँ वर्षको तालिका भन्दा, पोर्चुगल चयन आवश्यक 12 अङ्गुर खान छ। सोफिया मा, रोशनी बन्द तीन मिनेट लागि टेबलमा बसिरहेको। कुनै एक तपाईं एक प्रेम एक चुम्बन गर्न रोक्न सक्छ जब यो नयाँ वर्षको चुंबन छ।
म पनि त्यहाँ धेरै लागत-प्रभावकारी यात्रा विकल्प छ भनेर याद गर्न चाहन्छु। यो बस युरोप को क्यापिटल यात्रा। साँचो, तिनीहरूले परिवहन यस प्रकारको सहनु सक्नुहुन्छ गर्नेहरूका लागि उपयुक्त हो, र लामो यात्राको लागि चुपचाप भन्छिन्। तर पैसा को एक धेरै सानो रकम लागि धेरै अन्वेषण र पुरानो विश्व को पहिलो प्रभाव बनाउन सक्छ। त्यसपछि राम्रो थाह बन्न चाहन्छु जो देश निर्णय।
सोफिया वर्ग - कीव को हृदय
Chemal मा सबै भन्दा राम्रो मनोरञ्जन
पाल संग लेक Seliger मा मनोरञ्जन: कहाँ रहन?
"माथिल्लो वन" (छात्रावास, सामारा): ठेगाना, सेवा,
आकर्षण को शक्ति के हो
अल्सर पेट? आहार रोग निको पार्न मद्दत गर्नेछ
स्रोत MCHP: प्रकार र विशेषताहरु
क्रास्नोडार मा विजय को 30th वार्षिकोत्सव को पार्क: तस्बिर, वर्णन र मनोरञ्जन को ठेगाना
गुडिया लागि सामान। बच्चाहरु को लागि खिलौने
"सेलेनियम संग ANTIOXICAPS": निर्देशन, समीक्षा
लेवीन ईसाक आइलीच को हो?